“Waxaa jira dad curyaaminaya amniga iyo dhaqaalaha Puntland, sidoo kale waxaa jirta abaar aad u daran ee aan u kacno” C/Sammed Cali Shire. – Radio Daljir
“Waxaa jira dad curyaaminaya amniga iyo dhaqaalaha Puntland, sidoo kale waxaa jirta abaar aad u daran ee aan u kacno” C/Sammed Cali Shire.
Garowe, Apr 23 – Madaxweyne ku xigeenka Puntland Gen, C/samed Cali Shire ayaa maanta (Sabti) sheegay inay jiraan dad doonaya inay curyaamiyaan ammaanka iyo dhaqaalaha Puntland, ayna tahay in loo guntado sidii kuwaas looga hortagi lahaa.
Ma uu sheegin kuwa ay yihiin kuwaasi laakiin ?Waa inaysan marna inaga helin gol-daloolooyin? ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka, oo uu ka muuqday dareen ku aadan sida ay uga xunyahay falalka amni xumada ah ee ka jira Puntland.
Generalka oo hadlayey wax yar ka dib markii uu maanta soo gaaray magaalada Bossaso ayaa tilmaamay in Puntland ay ka jirto xaalad aad u daran oo ay keentay abaartu, loona baahan yahay in loo istaago dawlad iyo shacabba u gar-gaaridda dadka dhibaatadu haysato.
Hadalka madaxweyne ku xigeenka waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dilal qorshaysan oo is xig-xigay ay ka dheceen magaalooyinka waawayn ee Puntland, ayna jiraan abaaro hadda maraya meeshii ugu darnayd, kuwaas oo dad u dhinteen kuwana ay hadda u yaallaan isbitaalada nafaqo darro abaartu keentay.